Zvose pamusoro peNolvadex
1.Chiiko Nolvadex? Chinoshanda sei? 2. Nolvadex anoshandisa
3.Nolvadex muyero 4.Nolvadex zvawanikwa
5.Nolvadex hafu yeupenyu 6.Nolvadex nemigumisiro
7.Nolvadex inobatsira 8.Nolvadex kuongororwa
9.Nolvadex inotengeswa 10.Nolvadex kutarisira kusununguka kwevakadzi
1. Chii chinonzi Nolvadex? Chinoshanda sei?
Panguva ino, kenza yemazamu ndeimwe yezvirwere zvakapararira izvo vakadzi vanotambura nazvo. Kazhinji tsvakurudzo yakaitwa uye ichiri kuitika pamishonga inogona kubatsira mumwe kurarama hupenyu husina kenza. Nolvadex (54965-24-1) ndeimwe yemishonga yakaratidza kuti inobatsira mukudzivirira nekurapa kenza yemazamu. Zvimwe kunze kwekuti izvo zvingakwanisika zvinowana nzvimbo panzvimbo yepasi rose.
Nolvadex (54965-24-1) chirwere chepiritsi chakange chave chichibatsira mukurapwa kwevarwere vakambova nekenza yepamhanho. Yakawanikwa muna 1966, uye yekudzidza kwayo semishonga yekurapa kenza yakatanga mu 1970. Muna 1998, yakatanga kuva mishonga yekuwana ruzivo kubva kune FDA kuti ibatsire kudzivirira kenza yemazamu. Kutsvakurudza kwakaitwa kwakaratidza kuti Nolvadex yakaderedza mikana yekutambura nekenza yemazamu ne50% yevakadzi vakanga vari pangozi yekukudziridza.
Kuti unzwisise kuti Nolvadex inoshanda sei, iwe unofanirwa kuziva kuti masero emukenza webonde anoda hormone yevakadzi inonzi isrogen kukura nekuwanda. Tamoxifen, saka, inokwanisa kupedza izvi nekukwikwidzana ne estrogen mukusunga kune estrogen receptors mukenza yengamera yebhumbu.
Nolvadex (54965-24-1) inonzi yakanzi se selegengen receptor modulator (SERM). Izvozvo, zvino, zvinoderedza kukura uye kubereka kwemasero emukamu webonde nekudzivirira isrogen muzamu.
Zvimwe pane Nolvadex kurwisana nesrogen mumasero echepabonde, iyo inonyorawo maitiro anobatsira anrogen zvinokonzera mumuviri. Kune vakadzi vanomira mumasopaopausal ari pa tamoxifen, inogona kuderedza dambudziko rehutano hwemwoyo uye osteoporosis (chikonzero chinokonzera kukonzera kuparadzwa kwemapfupa) pasina kutora hormone inotsiva kurapa.
2. Nolvadex anoshandisa
Nolvadex yave iri kushandiswa kubva panguva yakareba mukurapwa kwemamiriro akasiyana-siyana. Inouya semuponesi pamwe chete nehuzhinji hwevarume nevakadzi vanotambura nezvirwere zvakadaro kamwechete munguva yehupenyu hwavo. Heano mamwe emamwe Nolvadex anoshandisa izvo zvakazviita kuti zvive pachena;
Nolvadexmay inorayirwa kune varume nemadzimai sekurapwa kwemuviri wecymph node kana kuti lymph node-negative cancer yepamu mushure mekunge vashanda zvakanaka. Kushandiswa kweNolvadex kwakaratidza kuti kunobatsira zvikuru pakubata nekenza iyo ine positive estrogen uye progesterone receptors. Nolvadex inoderedza ngozi yekenza kuendesa kune rimwe rakamupa.
Varume nevakadzi vane kenza yemastastatic breast (kenza yakapararira) inogona kunyorwa neNolvadex.
Vakadzi vanotambura ne ductal carcinoma in situ (DCIS) uye avo vakatoona kurapwa uye kurapwa kwemaawa kunogona kubatsirwa nemurwere uyu zvakare. Muchiitiko ichi, Nolvadexmay inoderedza dambudziko rekutambura nekenza yemazamu isingaiti. Ngozi uye kubatsirika kwekutora iyi kurapa, zvisinei, zvinokurukurwa kare.
Vakadzi vari pamwero mukuru wekudzivirira kenza yepabonde vanogonawo kurongerwa nemishonga kuti vabatsire kukwanisa kuva nayo. Ngozi uye kubatsira kwekurapa iyi, zvisinei, zvinokurukurwa munyaya ino.
Imwe yevasingazivikanwi Nolvadex inoshandisa kurapwa kwekenza yevana.
3. Nolvadex dhigiri
Iko Nolvadex muyero haifaniri kunge yakanyanya kukwirira kuti iite basa; iyo SERM yakasimba inoshanda zvakanaka pamutsetse wakaderera. Nekurapa, izvo zvinowanzoitwa Nolvadex dhigiri iri 10-20mg, inoshandiswa kaviri zuva rimwe nerimwe.
Pamusana pemishonga inorwisa-estrogenic uye pro-testosterone, iyo Nolvadex inayira inofanira kuva pakati pe10-40mg pazuva. Nhamba yaunosarudza inobva paukuru hwako, zvinangwa, uye nguva yaunoda kuva nayo.
Zvakanaka kucherechedza kuti nolvadex yepamusoro yepamusoro hairevi kuti pane zvakanyanya kunaka. I10-40 mg ichakupa chinhu chakakosha uye chinokurumidza chaunoda mukuderedza zvinokuvadza zvekutora anabolic steroid.
Izvo hazvina fungiro dzinokosha dzakatorwa maererano nehutungamiri hweNolvadex. Icho chisarudzo chako kuti uchitore iko zvisati zvaitika, shure, kana panguva yekudya. Iwe unogonawo kuva naro mangwanani kana panguva dzousiku. Dzimwe nguva inorayirwa kuti haufaniri kuparadzanisa Nolvadex dhigiriji.
4. Nolvadex migumisiro
Nolvadex inoguma mukudzivirira kwekenza ndeimwe yepamusoro inofananidzwa nemamwe mishonga yemukenza. Migumisiro inoratidza huwandu hwe50% kudarika vakadzi vakadzivirirwa nekenza yepamu isina kuvharirwa uye isingaiti. Kuitora kwemakore mashanu kusvika kune gumi kwakaratidza kuderedza kudzokorora kwekenza imwechete yemazamu uyewo kune ngozi yehumwe hutachiwana hutachiwana.
Nolvadex inoita kuti ive sarudzo yakanakisisa mukurapa gynecomastia zvose sekudzivirira mishonga uye sekurapa kwokutanga kwekuvandudzwa kwekutanga kwemwechete. Mukudzidza kwakangoerekana kwaitwa nevarwere gumi mumwedzi umwe, vanomwe vavo vakawana kuderera kwehukuru hwezvipfuva zvavo. Vane vavo avo vakatambura gynecomastia inorwadza vakawana zororo. Kwakanga kusina chepfu yakashushwa.
Iyo inopawo mhinduro dzakanakisisa mukusimudzirwa kweTesttosterone yakagadzirwa sezvo yakanzi yakadzokera kumashure mushure mevhiki ina.
5. Nolvadex hafu-hupenyu
The Nolvadex hafu-hupenyu iyo yakareba kwenguva yakareba yakaenzaniswa nemamwe makemikari omuromo. Inenge mazuva anenge mashanu kusvika kune manomwe nemamwe masangano anoratidza kuti Nolvadex hafu yeupenyu inogona kuenda chero mazuva gumi namana.
6. Nolvadex nemigumisiro
Nolvadex chirwere chakatanga kuzivikanwa makore makumi mashanu apfuura, uye hazvishamisi kuti zvese zvayo zvakadzidzwa zvakakwana. Iyo ine zvikomborero zvizhinji, asi kunewo zvakare Nolvadex madhara izvo zvingakutambudza iwe. Hazviiti, zvisinei, zvinoreva kuti kana watanga kuitora, unofanirwa kupinda muNolvadex migumisiro. Kazhinji yenguva, iwe haungambogoni kutambura kubva kune imwe yeiyo.
Kakawanda, iyo Nolvadex migumisiro inofanirwa kunyatsozivikanwa maererano nekutangira kwavo uye nguva yakareba sei yachatambura kubva kwavari. Zvakakoshawo kuziva kuti migumisiro yemigumisiro inogara ichidzokidzwa uye nguva dzose inopera kana wapedza nemishonga.
Kana ukangoteerera muviri wako, uchaziva kuti migumisiro yacho inogona kuva yakaoma mune mamwe mamiriro ezvinhu, uye unogona kuderedza kana kudzivirira kuburikidza nokuita zvimwe zvigadziri. Mimwe yemigumisiro yakazara inosanganisira;
Hapana anoda kuita zvakanaka pamubhedha, kunyanya kana wakanga uri kuita zvakanaka. Kunyange zvazvo imwe yeNolvadex inobatsira ndeyokuti inowedzera maitiro e testosterone, inogonawo kuderedza hutano hwepabonde. Zvidzidzo zvakaitwa zvakaratidza kuti vamwe vevashandi veNolvadex vakanyunyuta kwepasi re libido, uye kune vamwe, inenge isipo.
Kuora bvudzi kunogona kuva kurwadziwa. Zvinosuruvarisa, zvinowanzoitika nekushandiswa kweNolvadex.
Kuzvimba mumaoko, makumbo, uye tsoka
Heano mahedhi eNolvadex mhedzisiro anoda kukurumidza kurapwa.
Shanduko muchiono chako
Kunzwa kushungurudzika (kusakwanisa kuita zviitiko zvako zvezuva nezuva zvakajairika)
Nausea (kusakwanisa kudya kana kunzwa kusunungurwa kunyangwe mushure mekutora mushonga wakarairwa)
Kuwedzeredza kwechikadzi kunobuda pamwe nekubuda ropa, kurwadziwa uye kusarongeka kwemwedzi
Mapundu matsva ezamu.
Kuzvimba, kurwadziwa, kana kutsvuka mune imwe yemakumbo kana maoko uye kwete iyo imwe
7. Nolvadex inobatsira
Vazhinji vanhu havaone gynecomastia kana murume boobs kunge yakanyanya mamiriro, asi mupfungwa chaiyo ndizvo. Iko kusimudzira kwemazamu matumbu mune varume. Kazhinji, iyo inokonzerwa nekushandurwa kwemahomoni emunhu nekuda kwezvinhu zvakaita zera kana kushandiswa kwemasoftware.
Muchiitiko ichi, kuwedzera kweestrogen / testosterone ratio kunogona kuve iko kunotungamira. Zvakare, kuwedzera kweestrogenic kana kuderedzwa androgenic kukurudzira kuburikidza neestrogen kana androgen receptor kusangana kunogona kuve iko kukonzera.
Varume vanotambura narwo havangoone chete shanduko mukuonekwa kwavo, asi zvinogonawo kukonzera kukuvara kwepfungwa kwavari. Kunze kwekurasa kurasa kuvimba kwavo, zvinogona kuita kuti munhu ashungurudzike kusvika pakuda kuzvivanza. Zvakatoipisisa, zvinogona kuita kuti munhu aedze zvakaoma kuvanyararira nekudaro achizoenda anowanda mashati uye kudzivirira zviitiko zvinogona kuburitsa miviri yavo, semuenzaniso, kushambira.
Mazuva ano, varume vazhinji vane mamiriro aya vanogara vakatarisira mhinduro isingaperi. Chinhu chakanaka chiri, chimwe che Nolvadex inobatsira ndeyekuti inoderedza mazamu akawandisa pasina kuita kuti imwe itarwe zvakanyanya. Nolvadex, saka, inopa sarudzo yakachengeteka uye inoshanda mukurapa kwemamwe ematare gynecomastia.
Wedzera musasa mashoma
Maitiro ekuwana tsandanyama svinu anotaridza kunge asina kuoma. Zvese zvaunobvunzwa kwauri kusimudza masimbi, kuve pachikafu chaicho, uye kutora zvakanakisa zvekuvaka muviri. Wakambozvibvunza here zvaungaita kudai iwe ukarova pabani? Ndeipi chigadzirwa chaungashandisa kana uchida kubvisa mazviri? Iwe unosimudzira sei kukura kwehururu hwako?
Icho chokwadi chekuti imwe yeNolvadex inoshandisa ndeyekuwedzera testosterone mumuviri inoita sarudzo yakakodzera kana iwe uchida kuwedzera muswe wako zvakanyanya. Inoita izvi kuburikidza nekuita kweiyo hypothalamus uye pituitary gland muuropi. Izvo zvinotungamira mukuwedzera mukugadzirwa kweFollicle Stimulating Hormone (FSH) pamwe neLuteinizing hormone (LH), iyo inosimudzira kugadzirwa kweTestosterone nema testes.
Sezvineiwo, kana murume akatora 20mg Nolvadex kwemazuva gumi, iwo testosterone level riri muropa ravo rinogona kuwedzera ne41%. Kana yakashandiswa kwemavhiki matanhatu, maitiro e testosterone anogona kuenda zvakakwirira se84%.
Testosterone ihomoni inogadzirwa nemasikirwo mumuviri. Iyo inobatsira mukuvandudza synthesis yeprotein yemasumbu, pakati pemamwe mabasa. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvinogona kukanganisa testosterone kugadzirwa. Kupikisa izvi, iwe unogona kushandisa Nolvadex kuwedzera kugadzirwa kwe testosterone.
Post cycle kurapwa
Nolvadex ndeimwe yevasina-steroidal SERMs, saka inoratidza zvese zviviri zveEstrogenic antagonistic pamwe neestrogenic agonist migumisiro mumuviri. Izvi zvinoreva kuti mune dzimwe nzvimbo, zvinogona kutungamira kumiganho yeestrogenic ipo mune dzimwe, zvinogona kutungamira mukukanganisa maantiestrogen. Imwe yemigumisiro yakadaro ndiko kuwedzera kwekugadzirwa kwe testosterone. Izvo zvinoderedzawo migumisiro ye estrogen mumuviri.
Izvo zvinokonzerwa nechikonzero ichi kuti Nolvadex inoonekwa sechinhu chakakosha kana munhu achida kuita post mzunguko kurapwa. Izvi ndechokuti mushure mekunge vaine vanabolics steroids mhepo, vanogona kuzvishandura kuva estrogen. Nekuda kweizvozvo, munhu anogona kuwana murume boobs, zvinoreva kuti zvaunowana zvichaparara. Nokudzivisa isrogen, yakadaro migumisiro inochengetedzwa. Mazinga e testosterone anowanzodzoka kune akangwara semugumisiro wekushandisa kweNolvadex.
Kazhinji, Nolvadex inotumirwa pakarepo mushure mekunge zvese anabolic steroid zvacheneswa kubva mumuviri wemunhu. Mumwe anofanirwa kutora 20-40mg zuva nezuva kwemavhiki mana kusvika matanhatu. Chero chiyero chakakwirira kudarika icho hachipei chimwe chinhu chinokosha.
Munguva yePPT, Nolvadex inotumirwa pamwe chete neinenge imwe chete kana maviri Testosterone inomutsa masikisi akadai searomatase inhibitor yakaita seHCG kana Aromasin. Iko kunakisa kwekuvashandisa pamwe chete ndiko kuwedzera mhedzisiro nekusimudzira basa reHPTA.
Iko kushandiswa kweNolvadex panguva yekutenderera kunofanirwa, zvisinei, kudzivirirwa kana iwe uchivavarira kuverenga testosterone kudzvinyirira nekuti kazhinji inogona kusashanda. Izvozvo zvinogona kureva kuti mari yako ichaderera pasi.
Kusiyana nemamwe makore apfuura, kuderedza uremu zvino kunoonekwa seimwe yetikiti rekutaridzika zvakanaka. Zvimwe kunze kwekuve nemitsipa inotendeuka, kurasikirwa uremu kunogona kureva kuti iwe unoda kuve noutano. Kudurura mamwe macalorie haana, kunyangwe zvakadaro, haisi chinhu chakaipirana. Imwe nzira iyo iwe unogona kubudirira mukurema kwako kurasikirwa rwendo iko kuburikidza nekushandiswa kweNolvadex.
Zvidzidzo zvakaitwa pa Nolvadex migumisiro pakuderedza uremu kwakaratidza kuti inoshanda pamwe nezvakawanda zvezvivakwa zvayo zvinobatsira mukudzora uremu. Kazhinji, Nolvadex yakaratidza kuve nehunyanzvi hwekubatsira muviri kupisa mafuta akawanda kana metabolism ikarova. Inotungamira kune yakavandudzwa lipolytic basa nekudaro kuwedzera kwekupisa kwemafuta.
Pamwe chete neClenbuterol, ivo vanogona kutungamira kudzikira kwe lipoprotein lipase chiitiko iyo yakakosha enzyme mune metabolism ye triglyceride. Vaviri vanogona, saka, kuita semushonga wekurasikirwa. Uyezve, Nolvadex inozivikanwa kuti inowedzera kugona kwemuviri kupisa mafuta uye zvakare inokwidziridza huwandu hwesimba hwakakosha muchirongwa chekupisa mafuta.
Inosimbisa immune system basa
Apo patinotaura nezvomuviri wechiratidzo chemuviri, tiri kutaura nezvekwanisa kurwisa zvirwere uye zvirwere. Asingazivikanwe nevazhinji, Nolvadex ine maitiro anobatsira pamaviri immune system.
8. Nolvadex wongororo
Alexandra M. anoti, "Ndanga ndichishanda kwemwedzi mitanhatu yadarika, uye shanduko yemuviri yanga isati iri yakawanda zvandaitarisira. Ndakatanga kutsvaga chimwe chinhu chingaita kuti musimba wangu uwedzere uye wakagadzirirwa Nolvadex. Nolvadex zvinowanikwa zvinongonakidza. Misi miviri yangu yakawedzera kuseka, uye ini ndinonzwa sokuti chigadzirwa ichi chinofanira kutendwa zvakafanana. "Ndinozvirumbidza kune chero munhu anotarisa kunge ane mhasuru dzakakura."
Yakanyanya kurasikirwa uremu mushonga
Priscilla K anoti, "Mushure mekutsvakisisa kwakawanda, ndakaona kuti imwe yemubatsiro weNolvadex ndeyekudzora uremu. Handikwanise kumirira kuti ndiedze, uye pakarepo ndakaraira pano; Ndakawana pasuru yangu muzuva. Parizvino ndarasikirwa nemakirogiramu gumi, uye handisati ndambofara. Iko zvino yava kuva kuenda kwangu-kurerutsa kurasikirwa nemishonga, uye shamwari dzangu nemhuri vanoda kuedza zvakare. Ini handina kutambura kubva kune chero mhedzisiro yeNolvadex parizvino, kusiyana nezvandakaita kana ndichishandisa mamwe madhiragi ekudzikisira uremu. "Kana uchida kuteura imwe musina uropi hwako uye mwoyo wako unotambura, saka Nolvadex ndiyo yaunofanira kuenda."
Leila Wagner anoti, "Ndichangogamuchira chishamiso changu cheNolvadex svondo rapfuura." Ndiri kufunga kuti chingave chishamiso chei? Mushure mekuedza kubata pamuviri kwemakore gumi apfuura pasina rombo, ini pakupedzisira ndakaedza kuti ndiite nerubatsiro naNolvadex, uye ikozvino ndakabata bundle yangu yemufaro. Ndakanga ndisingazivi kana ndikazokwanisa kuitakura kusvika kune imwe nguva, uye ndinofara kuti ndakazopedzisira ndaita. Ini ndichiri mukusatenda, uye ndakazongoti mwana wangu chishamiso. Chero ani anga achiedza kubata pamuviri anofanira kuyedza Nolvadex. "
Yakanyanya PCT mushonga
Cassie Houston anoti, "Ndakaraira murume wangu chigadzirwa ichi nekuti akange atanga kugadzira mazamu nekuda kwekushandiswa kwema-steroid. Izvo zvakamubata zvakanyanya zvekuti akatotora zororo rekurwara nekuda kwekunyara. Bhabido yake yaiva yakaderera, zvakare, uye isu takanga tisisati tonakidzwa kuva pamwe chete. Mushure mekuva pane ichi chigadzirwa, anoti izvo Nolvadex mhedzisiro inoshamisa. Zvinhu zvose zvino zvave zvichipindurwa, uye iye adzokera kune zvakajairika. Matumba akaderedzwa zvakanyanya, uye adzoka kubasa. Iyo libido ikozvino yakakwira zvakare. "Ndinotenda kuti iyi ndiyo PCT yakanaka kwazvo inopa Testosterone yako kukurudzira."
9. Nolvadex yekutengesa
Iwe unogona kuda Tenga Nolvadex poda sePCT zvinodhaka kana kuti kutarisana nekushaya simba. Uyezve, unogona kunge uri mukutsvaka kuva nemisimba mikuru kana kuti unoda kuwana humwe uhu nekukurumidza. Mubvunzo mukuru ndewekuti iwe unogona kuhuwana kupi?
Imwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa nevanhu ndevekwavanogona kutenga Nolvadex poda. Kwete kungoitenga chete asi tora imwe yakanaka uye yakarongedzwa-mushe. Tichifunga kuti pane dzakawanda online nzvimbo dzaunogona kutenga kubva kwauri, unogona kunge usina chokwadi chekuti ndeupi ari kupa Nolvadex iyo yakachengeteka.
Kuti uve nechokwadi chekuti uri kutenga izvo zvakanaka, unogona kusarudza kutenga Nolvadex yekutengesa kubva kwatiri. Iwe unogonawo kutenga Nolvadex yakawanda pamutengo wakaenzana kana chinangwa chako chiri kutengesa. Chinhu chakanaka ndechekuti neNolvadex yedu, hapana mukana wekuwana maronda emudumbu kana muchetura kubva kwairi; ichokwadi Nolvadex.
10. Nolvadex kubata kusabereka muvakadzi
Unonetseka kubata uye kunzwa uchimanikidzwa? Hausi wega. Statistics inoratidza kuti kutenderera 7% yevakadzi vakaroora vane kusabereka zvinetso pasi rese. Hazviiti, zvisinei, zvinoreva kuti kana munhu ane dambudziko, haazombofi akawana mukana wokubata mwana wavo.
Imwe yenyaya hombe dzinoparira kusabereka idambudziko re ovulation. Zvinogona kukonzerwa ne polycystic ovary syndrome, iyo inoonekwa nekusagadzikana kwehomoni nekudaro ichikanganisa neyakaitika ovvari. Nhau dzakanaka ndedzekuti pane mishonga yakapihwa nemuromo kana jekiseni iyo inobatsira munhu kubereka mazai kana vanga vachinge vachinge vaomerwa chero. Ivo, saka, kuwedzera mikana yekuvhota inoitika.
Kuburikidza neizvi, munhu anogona kugadzira nguva kwayo nekudaro achivandudza mikana yekuve nepamuviri. Imwe ye Tamoxifen Citrate powder Zvikomborero ndezvokuti zvakaratidzwa kukurudzira ovulation zvakanaka. Uyewo, inokurudzira mazai mazai kuti atange mazai akawanda kana mumwe ave achibudisa imwe. Iyo inobatsira nayo ndeyokuti kushandiswa kwayo hakusi kwengozi uye inokuvadza zvakadai sokushandiswa kwegonadotropin (mishonga inokonzerwa nekuvhara ropa).
Clomid inowira mukirasi imwechete seNolvadex, uye zvose zviri zviviri zvinowanzoshandiswa pakurapa marwadzo ehupenzi muvakadzi vasina vana. Vanoshanda nenzira imwechete uye vakaratidza kuti vanobatsira kubvisa ovulation mu 65-75% yevakadzi. Clomid, zvisinei, inouya nemigumisiro yakadai sekunopisa kwemagetsi ekugadzirisa mhepo saka haikwanise kubata. Kune rumwe rutivi, hapana mitsara yakaitwa paNolvadex migumisiro pamubereki.
Tamoxifen: Beyond the Antiestrogen, naJohn A. Kellen, peji 1-201
Tamoxifen, Dr. Titus Marcus, Akabudiswa neIndaneti, 29thMarch 2019, 1-18